Vaky trano teny Andoharanofotsy 15 lahy nifanjevo tamin’ny zandary
Raha ny fanazavan’ny depioten’Atsimondrano, Andry Ratsivahiny, dia ny alin’ny 14 aprily tamin’ny 10 ora sy 56 izy no nahazo antso vonjy fa misy manafika eny Morarano Andoharanofotsy.
Tamin’ny 10 ora sy 59 minitra izy no nahazo ny CB Andoharanofotsy an-telefaonina ka hamonjy ny toerana ny zandary maro. Tamin’ny 11 ora sy fahefany no teny an-toerana ny zandary efa vonona, raha ny fanazavany hatrany. 15 lahy ny no nanafika teny an-toerana, raha ny fampitam-baovao, saingy vaky nandositra ary tsy nahatondra afa-tsy vata fahitalavitra sy solosaina rehefa nifanjevo tamin’ireo zandary. Tsy nisy ny aina nafoy, raha ny fampitam-baovao hatrany.